Fampahalalana momba ny besinimaro
Tamin'ny volana Aogositra, sambany tamin'ity taona ity, nisy fiakaran'ny fivarotana antsinjarany any Sina. Tamin'ny volana aogositra, sambany tamin'ny taona 2020, nisy ny fiakaran'ny fivarotana antsinjarany ny entan'ny mpanjifa any Chine, izay ny mari-pamantarana lehibe amin'ny fitomboan'ny fanjifana, porofon'ireo angon-drakitra navoakan'ny fanjakana tamin'ny 15 septambra ...
PRC METY HAMorona ZONES TRANO MAIMAIMPOANA.
Ny faritra fivarotana malalaka dia toa hiseho any amin'ny faritanin'i Heilongjiang sy Xinjiang Uygur faritra PRC mifanila amin'i Russia. Antenaina hapetraka ihany koa ny faritra any amin'ny faritanin'i Shandong. Ny mety hisian'ny FTZ any amin'ny faritanin'i Hebei manodidina dia avo - natolotra ...
Huawei dia lasa mpanamboatra elektronika lafo indrindra an'i Shina amin'ny taona 2020
Huawei dia lasa orinasa elektronika mpanjifa sinoa lehibe indrindra. Ity dia notaterin'ny magazine Shanghai "Huzhun" miorina amin'ny valin'ny fanadihadiana. Ny kapitalin'i Huawei dia tombanana ho 1,1 trillion yuan ($ 163,8 miliara).